२०७८ असार १ मङ्गलवार
अबिरल वर्षाका कारण सेतीवेणी बजार डुबानमा, १० घर विस्थापित
सुदूरपश्चिमका सांसदको निलम्बन दलको बैठकका लागि मात्र
भारतमा भेटियो दोस्रो लहरभन्दा शक्त्तिशाली हुने ‘डेल्टा प्लस’
चार दिनमा ८ जनाको मृत्यु, रक्सी धेरै खाँदा ज्यान गएको आशङ्का !
खोलाले बगाउँदा दुई बेपत्ता
सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने भन्दा जानेको सङ्ख्या बढ्यो, एक महिनामा १७ हजार पलायन
भोली शुक्रबार सन्तोषी माताको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
गृहपेज » राशिफल »
भोली शुक्रबार सन्तोषी माताको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
बिहीबार, भदौ १८ २०७७
२०७७ साल आश्विनकृष्णपक्ष भाद्र १९ गते शुक्रवार द्वितीया तिथि उत्तरपदा नक्षत्र चन्द्रमा मीन राशिमा
मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । आफैले आँट नगर्दा कतिपय कुराहरु बिग्रन पनि सक्नेछन । आफन्त हरुसँग बिग्रेको सम्बन्धमा सुधारको महसुस गर्न पाउनु हुनेछ । पढाइमा लेखाईमा भने सोचेअनुरूप सफलता पाइने छैन । त्यस्तै शरिर पनि आलश्यमय रहने छ । मानसिक चिन्ताको कारणले कामहररुमा सुस्तता आउने पनि देखिन्छ सावधान रहनुहोला । अनावश्यक रुपमा खर्च पनि हुने देखिन्छ ।
लेखन प्रकाशनसँग सम्बन्धित काममा सफलता मिल्ने देखिन्छ । शत्रु पराजित हुनेछन् । यात्राका क्रममा केहि खर्च हुने देखिन्छ । आम्दानीका प्रशस्त ढोकाहरु खुल्नेछन । ब्यापार व्यवसायमा कमी आएता पनि सोचेका योजनाहरु सफल हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । विलासिताका सामग्री किन्नमा मन जानेछ । धन प्राप्ति तथा विविध माङ्गलिक कार्यमा सहभागी हुनुहुनेछ ।
व्यवहारिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्ररी लाभ लिन सकिने छ प्रयास भने गर्नु होला । माया पीरतिका कुराहरुमा प्रगती होलान् । शत्रुहरु पनि तपाईंको गुणगान गाउन शुरु गर्नेछन् । सामाजिक तथा धार्मिक कामप्रति मन जानेछ । दानपुण्य गर्दा लाभ होला । बडो बुद्धिमत्तापूर्णतरिकाले कामहरु गर्नु भए सफलता मिल्ने देखिन्छ । समयको ख्याल पनि गर्नु होला । स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडि देखिएला ।
समय मध्यम किसिमको छ । आजको दिन मनोरंजन पूर्ण रहनेछ । समाजका मान्य र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । संगत अनुसार फल मिल्ला । थोरै परिश्रमले पनि ठूलो उपलब्धि हात लाग्नेछ । तर सामान्य कुरामा पनि विवाद उत्पन्न हुनसक्छ सावधान भने रहनु होला । यतिबेला बोलेर काम बन्ने जस्तो छैन । नबोलिकन काम गर्दा राम्रो छ । ज्ञानगुनका कुरा सिक्न पाइने छ । सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्न वातावरण बन्ल ।
आज कुनै सांगितिक माहोलमा उपस्थित हुनुपर्ला । खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरु पनि प्राप्त होलान् । गरिराखेको कामबाट मन खिन्न होला, तर पनि नयाँ कामको सम्भावनाले आशा भने जगाउने देखिन्छ । प्रेमका रमाइला कुराहरु होलान् । आज तपाईंका विरोधीहरुले पनि तपाईंको प्रशंसा नगरी सुखै छैन । आफन्तबाट पनि राम्रो सदभाव प्राप्त हुने देखिन्छ । यात्राको क्रममा सानोतिनो ग्रहको प्रभाव परि नै रहने छ सावधान् रहनु होला ।
विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा संलग्न हुनु पर्नेछ । अरुले पनि आज तपाईंको कामलाई राम्रो मान्नेछन् । पढाइ लेखाइ तिर भने त्यति मन जाने देखिन्न । नया काम भन्दा पुरानै कामको नियमिततालाइ नै जोगाइ राख्नु होला । इज्जत वृद्धि हुने बेला छ । सत्रु जति कराए पनि ठूलो नोक्सानी गर्नसक्ने छैनन् । शरिरमा सानोतिनो घाउ लाग्ला सावधान रहनु होला ।
मिष्ठान्न भोजन प्राप्त गर्न सकिनेछ । भोज भत्तेर कै क्रममा विभिन्न इष्टमित्रसँग भेटघाट पनि होला । आजकै दिन आत्मबल बढाउने काम पनि हुने देखिन्छ । नयाँ ठाउको भ्रमण गर्ने बेला आएको छ । अनेक किसिमका नयाँ कामका बारेमा मनमा कुरा उब्जने पनि सम्भवना रहेको छ । सानातिना रोगबाट छुटकारा मिल्ने समय छ ।
साँस्कृतिक तथा सामाजिक कामको दायित्व बड्ने दिन छ । यतिबेला तपाईंंले गरेका कामको राम्रै इज्जत पनि होला । परिश्रमको मुल्याङ्कन समाजले राम्रै गर्ने देखिन्छ । पैसा कमाउने कुरामा नयाँ नयाँ बाटाहरु पनि पत्ता लाग्लान् । राम्रा व्यक्तिहरुसितको सम्पर्कले बिग्रन लागेका कामहरुमा पनि शुभ सङ्केतहरु देखिएलान् ।
भोज भतेर तथा सामाजिक कार्या सहभागी बन्नु पर्ला । साथिभाईको प्रेरणाले केही काम गर्न मन लाग्ला । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । सानातिना अवरोध स्वतः हटेर जानेछन्। नयाँ विकल्पकबाट प्रगति गर्नसकिनेछ । तपाईंको विस्वासी स्वभावले तपाईलाई नजिककै मन्छेले ठग्न सक्छन् सावधान रहनु होला । परिवारमा रमाइलो वातावरण पनि होला
कामका चापले शरीरिक परिश्रम बडे पनि समय मनोरञ्जन पूर्ण रहने छ । बोलिमा नरमपन ल्याउन सके काममा सफलता मिल्ला । आर्थिक हिसावले पनि दिन धेरै राम्रो छ । मायालु मन्छेका लागि प्र¥याप्त समय छुट्याउन नसम्दा मनमुटाव हुन सक्ला । धेरै समय अगाडी देखि जान मन लागेको ठाउमा काम कै प्रस¨मा जान पाउनु हुने सम्भावना रहेको दिन छ ।
तर एउटा कुरा धन माल चोरी हुन सक्छ सावधान रहनु होला । लत्ता कपडाको काम अनि सजावटका सामग्रीको काममा फइदा जनक दिन छ ।
रमाइलो वातावरण बन्नेछ । राम्रा कुराको संकेत पाइने छ । सरकारी सेवामा प्रवेश पाउने समय छ । इज्जत वृद्धि हुने काम हुनेछ । भोज तथा खानपिनमा पनि समय वित्नेनेछ ।
आजको दिन ठिक ठिकैकोछ । सरकारी पक्षबाट केही न केही पुरस्कार वा सम्मान मिल्न सक्छ । सानो कामबाट पनि ठुलै उपलब्धि हात पर्ला । आध्यात्मिक तथा धार्मिक कामगर्न पनि समय अनुकूल छ । यात्राको योग रहेको छ, ज्ञानगुनका कुरा पनि सिक्न र सुन्न पाइएला । नयाँ काम गर्न वातावरण अनुसार यथेष्ट लाभ लिन सकिने छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, भदौ २७ २०७७ २०:५१:२३
बोका लिएरै आन्दोलनमा उत्रिए बेलबारीका युवा
नयाँ सङ्क्रमित २ हजार ९१८ निको हुने ५ हजार १४७
नेविसं‌घको विरोध शैली “प्रधानमन्त्रीको कुर्सी” भन्दै सांकेतिक कुर्सी सडकमा फ्याँकियो !
घट्यो सङ्क्रमण : काठमाडौं उपत्यकामा ६०७ जनामा सङ्क्रमण
आज यी ७ राशिको लागि अत्यन्तै खराब, कस्तो रहन्छ अन्य राशिको दिन?
२०७८ जेठ १८ गते मंगलबारको राशिफल
आजको राशिफल : २०७८ जेठ १५ गते शनिवार
आजको राशिफल : २०७८ जेठ १४ गते शुक्रबार
भोली शुक्रबार, यी ७ राशिको दिन शुभ रहनेछ, अरुको कस्तो ?
आजको राशिफल : २०७८ जेठ १३ गते बिहीबार
कोरोनाबाट डाक्टर रावतको मृत्यु
झापामा एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु
१७ हजारमा झर्‍यो उपत्यकाको सङ्क्रमण, आज ७६४ जनामा सङ्क्रमण देखियो